Fitbit Versa Lite kubheja kutsva kwaFitbit yezvipfeko | Ndinobva mac
Mumakore maviri apfuura, takaona kuti Fitbit yakazopedzisira yakunda sei kudonhedza mukutengesa kwakasangana nezvishongo zvayo zvequantifi nekuda kwekushomeka kwekuvandudzwa uye kuburitswa kwemhando dzinoyevedza dzinoyevedza. Parizvino inotipa mhando dzakasiyana dzemhando iyo iyo Fitbit Versa Lite inobatana.
Kufanana nemashandisirwo kana mitambo iri pamwe chete neyekupedzisira zita Lite, iyo Lite vhezheni yeFitbit Versa inotipa iwo akateedzana ezvikanganiso zvine chekuita neyekutanga versa. Zvine musoro, mutengo waro wakaderera, saka kana isu tiri kutsvaga yehupfumi quantifier ine yakanaka kuita uye bhatiri, iyi inogona kunge iri sarudzo yauri kutsvaga.
Musiyano mukuru watinowana nemhando yeVersa, tinoona iri iyo Lite vhezheni haina kubatanidza altimeter (izvo zvinotibvumidza kuverenga masitepisi atinoshandisa mukati mezuva rese kana kuziva kukwirira kwegomo kana tikakwira).
Uye hazvitibvumidze verenga mutambo wedu wezvemitambo panguva yekushambira kana kuchengeta uye kuridza mimhanzi. Maekisesaizi pachiratidziri ndeimwe yekukanganisa kwemuenzaniso uyu, pamwe nekusagona kushandura tambo kana kubhadhara kuburikidza neNFC chip.
Mutengo weFitbit Versa kuSpain ndeye 199,95 euros, nepo iyo Lite vhezheni ichave ichiwanikwa makumi mana euros zvishoma, 40 euros. Kana isu tichida iyo modhi ine tambo dzinochinjika, isu tinofanirwa kusarudza iyo Fitbit Versa Special Edition, iyo mutengo wayo uri 229,95 euros.
Kufunga izvo Fitbit haigone kukwikwidza kubva kwauri kuenda newe neApple WatchKambani iri kutarisa kuvhura mamodheru anodhura ane maficha akanaka kumusika, izvo zvakazvibvumidza kuti ive yechitatu pakukura inogadzira zvipfeko munyika, kuseri kweApple neSamsung.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Fitbit Versa Lite kubheja kutsva kwaFitbit pazvipfeko
Iyo LEGO Movie 2 Videogame iri kuuya kuMac munaKurume 14
Vese vatengesi veApple vakazvipira kunharaunda